UHunt neqembu lakhe bakulungele ukubhekana nePirates | Scrolla Izindaba
UHunt neqembu lakhe bakulungele ukubhekana nePirates
Kunesisho ebholeni esithi, “Ayisho lutho imidlalo edlule”.
Umqeqeshi weKaizer Chiefs uGavin Hunt uyakholelwa kakhulu kulesi sisho, futhi ufuna nabadlali bakhe bakholelwe kuso, ngaphambi kwe-Soweto Derby ezoba ngeSonto e-FNB Stadium ngehora le-3 ntambama.
I-Orlando Pirates ishaye Amakhosi kulandelana kule sizini edlule, ngesikhathi inqoba imdlalo emithathu, okubalwa nowe-DStv Premiership ababebhekane kuwo mhla zi-30.
Kepha uHunt akaboni lutho oluphakeme nge-Orlando Pirates.
“Ebholeni imidlalo edlule ayisho lutho uma kukhulunywa ngemidlalo ezayo. Ukusihlula kwabo emidlalweni edlule akusho lutho kulo mdlalo ozoba ngeSonto. Uma sengikhuluma iqiniso abasithusi ngalutho,” kusho uHunt.
Njengamanje iPirates isendaweni yesithathu kanti iChiefs isendaweni ye-11 ngamaphuzu ali-15 ahlukanise lamaqembu. UHunt uvumile ukuthi iPirates yenze kahle kakhulu kule sizini.
“Uma ubheka itafula le-log ungasho ukuthi kukhona igebe elikhulu phakathi kwethu nabo. Le iyona ndlela okufanele nisihlulele ngayo, hhayi ngemidlalo edlule. Unganqoba imidlalo emihlanu ilandelana kodwa lokho akusho lutho kulowo olandelayo.
“Kodwa kumele ngivume, iPirates itshale imali enkulu eqenjini layo kule sizini. Yenze kahle futhi iyiqembu eliqinile. Kuzoba ngumdlalo onzima kakhulu kithina,” kusho uHunt.
Umqeqeshi wePirates, uJosef Zinnbauer, uveze ukuthi Amakhosi aseqala ukubukeka engcono emidlalweni yawo.
“Yebo, bake bathwala kanzima esikhathini esedlule kodwa uyazibona izimpawu zokuthuthuka. Bayiqembu elihle futhi elinomqeqeshi osezingeni eliphezulu onolwazi oluningi kule ligi. Kufanele sinyathele ngokucophelela ngeSonto. Bebebukeka besefomini emidlalweni yabo yeligi neye-Champions League,” kusho uZinnbauer.
Lo mqeqeshi waseJalimani wengeze ngokuthi, abadlali bakhe kufanele baqhubeke nohlelo lwabo lomdlalo olwabenza bathola amaphuzu ngesikhathi beshaya iqembu lase-Nigeria i-Enyimba kowe-CAF Confederation Cup ngoLwesithathu.